Chine Alloy Sliding Window Ares80-1 orinasa sy mpamatsy | Kinzon
Ny varavarankely sliding aluminium Ares80-1 dia misy rindrina aluminium sy casing fa tsy vy, vinyl na hazo. Ireo no safidy malaza eo amin'ny mpanao trano saika na aiza na aiza toerana io raha toa ianao ka te hahita azy ireo any amin'ny toeram-barotra ara-barotra na indostrialy fa tsy trano fonenana. Misaotra noho ny tanjaka tsara amin'ny lanjan-lanja lanja, ny fantsom-bolam-baravarana aluminium Ares80-1 dia tena mora apetraka.
Ny varavarankelin'ny sliding aluminium-Ares80-1
Misy ny mombamomba ny tohatra azo hialana amin'ny rano sy vovoka ho an'ny varavarankelin'ny sliding Aluminum
Ny traikefa dia mitovy amin'ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny varavarankely sliding aluminium Ares80-1 dia manana mpanjifa afa-po iray tapitrisa avy amin'ny firenena 40 sy traikefa 20 taona. Ny varavarankelin'ny sliding aluminium Ares80-1 dia mikarakara ny dingana rehetra amin'ny fizotrany, tohanan'ny fahalalana sy ny traikefa azo avy amin'ny fikarohana sy fananganana vokatra roa taona.
Endrika rafitra ho an'ny varavarankely sliding Aluminum Ares 80-1
1. Harato moka: Ny varavarankelin'ny sliding aluminium dia manana harato mesh vy amin'ny anti-halatra ny moka.
2. Lalana ambony: Ny varavarankelin'ny sliding aluminium dia mampiasa ny famolavolana marobe kokoa ho an'ny arabe ambony.
3. Taratasy fitaratra ambany: Ny varavarankelin'ny sliding aluminium dia mampiasa ny haavony samihafa sy ao anatiny amin'ny mombamomba ny fitaratra mba hialana amin'ny fikorontanan'ny rivotra.
4. Pejy fitaratra mahitsy: Ny varavarankelin'ny sliding aluminium dia manolotra famolavolana arc ho an'ny safidy samihafa.
5. Profilin'ny lafiny: Ny varavarankelin'ny sliding aluminium dia mampiasa ny mombamomba ny tombo-kofehy telo amin'ny marika manakana ny rano hiditra ao.
6. Famandrihana: Ny varavarankelin'ny sliding aluminium dia manolotra mombamomba roa track na roa ho an'ny safidy hafa.
7. Manidy: Ny varavarankely sliding aluminium dia manolotra hidin-trano tsy hita maso, hikarakara hidy na hidy crescent.
8. Caps: Ny varavarankelin'ny sliding aluminium dia mampiasa sela nilona ho an'ny lavaka famononam-bary ny alumina.
9. fitaratra: Ny varavarankely sliding aluminium dia manolotra fitaratra tokana na roa (5 + 9A + 5) ho an'ny safidy hafa.
10. Rollers: Ny varavarankelin'ny sliding aluminium dia mampiasa kodiarana fanitsiana.
Previous: Varavarankely amam-baravarankely Ares75F
Manaraka: Vendrana Sliding Window Ares80